Otu esi etinye gam akporo na VirtualBox ma nwee ọ gamụ na Android na PC | Androidsis
Ụlọ Ignatius | | Nkuzi, Gam akporo nsụgharị
Ụzọ kachasị mma iji kporie ndụ Android na PC abụghị site na iji emulators dịka BlueStacks, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ịwụnye ụdị gam akporo ozugbo na PC, site na VirtualBox. N'ụzọ dị otu a, anyị ga -enwe ike nweta ihe kachasị na gam akporo na kọmpụta na -enweghị oke nke emulators Android na -enye.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata otu esi eme ya wụnye Android na VirtualBox, n'okpuru anyị na -egosi gị usoro niile ị ga -eso. Agbanyeghị, ihe mbụ ị kwesịrị ịma gbasara usoro a bụ na ọ bụ VirtualBox, maka na ọ na -enye anyị ohere ịwụnye gam akporo na PC wee bugharịa ya ka ọ bụ ama ama.
1 Kedu ihe bụ VirtualBox
2 Etu esi ebudata VirtualBox
3 Otu esi emepụta igwe mebere na VirtualBox iji wụnye gam akporo
4 Budata gam akporo maka PC
5 Wụnye gam akporo na VirtualBox
6 Ma ugbu a, na?
Kedu ihe bụ VirtualBox
Dịka anyị nwere ike ịghọta nke ọma n'aha ya, VirtualBox bụ ngwa na -enye anyị ohere mepụta draịva mebere (igbe) ebe ịwụnye sistemụ arụmọrụ. Sistemụ arụmọrụ ndị a na -arụ ọrụ n'adabereghị na sistemụ arụmọrụ (ọ bara uru maka nkwụghachi ụgwọ) nke anyị na -eji mana n'ime. Nke ahụ bụ, anyị nwere ike na -agba gam akporo ma ọ bụ Linux, n'ime nnọkọ Windows mepere emepe.
N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike jiri sistemụ arụmọrụ abụọ ọnụ na -enweghị ịmalitegharị akụrụngwa anyị oge ọ bụla anyị ga -enyocha ụfọdụ data. Mgbe ị na -ekepụta draịvụ mebere iji wụnye sistemụ arụmọrụ, na nke a gam akporo, anyị ga -ebu ụzọ kọwaa nhazi ọ ga -eji, ya bụ, RAM, ebe nchekwa, ọnụọgụ cores na kọmpụta anyị ...
Ịwụnye gam akporo site na VirtualBox na -enye anyị ohere ị nweta ihe kachasị na gam akporo, kemgbe agaghị enye anyị oke dị ka à ga -asị na anyị na -ahụ na emulators gam akporo nke a na -ejikarị eme egwuregwu Android na PC. Na mgbakwunye, n'ụzọ dị otu a, anyị ga -enwe ike ịnụ ụtọ ụdị gam akporo emelitere karịa nke emulators na -eji.
Etu esi ebudata VirtualBox
N'azụ VirtualBox bụ Oracle, otu n'ime ndị dike kọmputa ruo ọtụtụ iri afọ, yabụ na ọ bụghị ngwa nke otu ndị enyi mere iji nweta euro anọ site na ịtinye malware, spyware na ngwanrọ ọjọọ ndị ọzọ na ndị otu anyị na -ahụ maka imepe ụzọ azụ izu ohi ozi ...
Ozugbo anyị matara ihe VirtualBox bụ yana ụlọ ọrụ dị n'azụ ya, oge eruola ibudata ya. Iji budata VirtualBox, anyị ga -eji naanị webụsaịtị ya naanị site na njikọ a.
Chefuo banyere iji ibe weebụ ndị ọzọ na -enye anyị ohere ibudata yaN'ụzọ dị otu a, anyị ga -egbochi ịwụnye ngwa na kọmpụta anyị n'oge usoro nrụnye nke ibe weebụ chọrọ ịbanye na anyị.
Ozugbo anyị ebudatara VirtualBox na ibe gọọmentị m gosipụtara gị, oge eruola ịwụnye ya. Iji mee nke a, naanị ihe anyị ga -eme bụ ịpị ugboro abụọ na ngwa wee pịa Ọzọ ruo mgbe usoro nrụnye ga -agwụ. Ntinye adịghị mgbagwoju anya, ihe dị mgbagwoju anya bụ usoro imepụta igwe mebere, usoro nke anyị na -egosi gị n'okpuru.
Otu esi emepụta igwe mebere na VirtualBox iji wụnye gam akporo
Ozugbo anyị rụnyere VirtulalBox na PC ma ọ bụ Mac anyị (ọ dị maka sistemụ arụmọrụ abụọ), ihe mbụ anyị ga -eme bụ ike mebere mbanye, unit ebe anyị na -aga ịwụnye gam akporo. A ga -emepụta nkeji a dabere na nkọwapụta nke anyị hiwere, ma ohere diski ike yana ebe nchekwa RAM na cores processor nke anyị hiwere.
Ozugbo anyị rụnyere VirtualBox, anyị na -egbu ya, anyị na -aga menu elu wee pịa New na Anyị na -ahazi parameters ka anyị na -egosi n'okpuru:
aha: Anyị na -ewebata aha nke anyị ga -eji amata ụdị gam akporo anyị ga -etinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na kọmputa anyị.
Mpempe igwe: Anyị na -ahọrọ folda ebe anyị chọrọ ịwụnye gam akporo.
Tipo: Android dabere na Linux, yabụ na ngalaba a, anyị ga -ahọrọ Linux
Versiondị: Na ụdị Linux, anyị na-ahọrọ Linux 2.6 / 3x / 4x na-esote ụkpụrụ ụlọ nke ụdị gam akporo anyị ga-arụnye (a na-atụ aro ka ịwụnye ụdị 64-bit)
Ogo ebe nchekwa: Site na 2 GB nke RAM, o zuru oke, agbanyeghị, ka anyị na -etinyekwu RAM maka ime omume a, arụmọrụ ya ga -aka mma.
Draịvụ ike: N'ebe a, anyị ga -ahọrọ nhọrọ Mepụta diski ike mebere ugbu a.
N'ikpeazụ, anyị pịa mepụta. Ọzọ anyị ga wụnye ụdị android na anyị ga -ebudata na mbụ site na isoro usoro ndị m na -egosi n'okpuru.
Budata gam akporo maka PC
Ozugbo anyị rụnyere VirtualBox, anyị ga -ebudata ụdị gam akporo nke anyị chọrọ ịwụnye. Ọ bụghị ụdị gam akporo ọ bụla ga -arụ ọrụ, mana nke pụrụiche ahaziri ka ọ rụọ ọrụ na PC. Ọrụ Android-x86 na-enye anyị ụdịdị Android dị iche iche (na ibe 32 na 64) ka ibudata na wụnye na PC ma ọ bụ Mac site na VirtualBox na-enweghị nsogbu.
para budata ụdị nke kachasị ọhụrụ, anyị ga-eleta ndị na-esonụ njikọ. Ọ bụ ihe amamihe dị na nbudata ụdị 64-bit, n'ihi na ọ ga-enye anyị ohere ị nweta ihe kachasị na kọmpụta anyị yana ụdị gam akporo. Nbudata ụdị gam akporo a iji wụnye na PC bụ n'efu.
Wụnye gam akporo na VirtualBox
Ozugbo anyị ebudatara ụdị gam akporo nke anyị chọrọ wee kee igwe mebere ebe anyị ga -arụnye ya (usoro enweghị mmasị), Anyị na -enweta igwe mebere nke anyị mepụtara, anyị na -ahọrọ ISO nke ụdị gam akporo wee gbuo ya.
Ihuenyo mbụ nke usoro nrụnye na -egosi anyị nhọrọ atọ, ebe anyị ga -ahọrọ nke ikpeazụ: Nwụnye - Wụnye Android -x86 ka diski ike.
Na -esote, anyị na -ahọrọ nkeji ebe anyị chọrọ ịwụnye ya, ebe ọ bụ na anyị ekebeghị ihe ọ bụla, pịa Mepụta / Gbanwee nkebi. Ọzọ, ka ajụjụ Ị chọrọ iji GPT? anyị na -aza ee e.
N'ọzọ na -esote, anyị ga -emepụta nkebi na diski ike mebere site na ịhọrọ nhọrọ New - isi - Bootable - dee. Anyị na -akwado na anyị chọrọ ịme usoro a anyị na -ede Ee wee pịa igodo ahụ Intro.
Ozugbo anyị mepụtara nkebi, anyị ga -emerịrị ya Hazie ya na usoro ext4. Na -esote, anyị na -akwado na anyị chọrọ Jiri GRUB bootloader n'ikpeazụ anyị na -akwado ikikere dee / agụ (dee gụọ). Ugbu a, anyị ga -anọdụ ala chere ruo mgbe nrụnye gachara.
Ozugbo anyị rụnyere gam akporo na PC anyị, ozugbo a na -agba ya na nke mbụ, anyị ga -emerịrị otu usoro ahụ ọ bụrụ na ọ bụ ama, na -agbakwunye aha njirimara na paswọọdụ Google anyị nke anyị chọrọ iji ụdị a.
Ọzọ, anyị na -aga Play Store wee wụnye ngwa anyị chọrọ. Buru n'uche na ejiri ngwa mmetụ aka mee ọtụtụ n'ime ngwa ahụ na ọ bụghị ịbụ emulator dị ka BlueStacks, ọ nwere ike bụrụ mmekọrịta na ngwa bụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Otu esi etinye gam akporo na VirtualBox ma nwee ọ gamụ na Android na PC
Otu esi ama ma ọ bụrụ na egbochila m na Facebook Messenger: ụzọ niile